IiNqanaba eziPhezulu zeeNgqungquthela eziPheleleyo
Kunyaka wabo wokugqibela wesikolo esiphakamileyo, abafundi abaninzi bafaka iikhosi ezifunekayo, baqhawula nayiphi na indawo ebuthathaka, kwaye basebenzise iinqununu ukuze bahlolisise iindlela ezinokuzikhethela.
Abadala aseKholeji banokufuna isikhokelo ekukhetheni izifundo ezifanelekileyo zokuxhasa izicwangciso zemfundo yesibini. Abanye abafundi banokucwangcisa unyaka we- gap ukuba bavumele ixesha lokufunda amanyathelo abo alandelayo xa abanye beya kusebenza ngqo.
Ngenxa yokuba izicwangciso ze-12-graders ziyakwazi ukuhluka ngokubanzi, kubalulekile ukubancedisa ukuba benze ngokwezifundo zabo iikholeji zabo zokugqibela zezikolo.
Iikholeji ezininzi zilindele ukuba umfundi azalise iminyaka emine yobugcisa beelwimi eziphakamileyo. Inkqubo yokufundela ibakala lesi-12 ibandakanya uncwadi, ukubunjwa, igrama kunye nesigama .
Ukuba umfundi engagqityi iBritani, iMerika, okanye iLwimi leNcwadi, unyaka ophezulu yithuba lokwenza njalo. Uhlobo olusisiseko lweShakespeare lunye lukhetho, okanye abafundi banokukhetha kwezinye iincwadi ezinconywe ngabadala abakhulileyo esikolweni .
Kuqhelekile ukuba abafundi basebenzise i-semester nganye yophando, ukucwangcisa nokubhala amaphepha amabini ophando olunzulu. Abafundi bafanele bafunde ukugqiba iphepha lekhava, imithombo yamagama, kwaye baqulethe imifanekiso.
Kukwabulumko ukusebenzisa ixesha xa babhala amaphepha abo ophando ukuqinisekisa ukuba abafundi banolwazi olusebenzayo olunzulu lweprogram yekhompyutha kunye neeprogram ezisetyenziselwa ukufomathiza nokushicilela uxwebhu lwabo.
Oku kungabandakanya ukusetyenziswa kwegama, ispredishithi kunye nesofthiwe yokushicilela.
Abafundi nabo bafuna ukuqhubeka bebhalela iintlobo ezahlukeneyo zezetekisi kuzo zonke iikharityhulam kwiintlobo ezahlukeneyo zezihloko. Igrama kufuneka ibandakanywe kule nkqubo, ukuqinisekisa ukuba abafundi baqonda umahluko phakathi kokubhala okusemthethweni nokungekho sikweni, xa usebenzisa nganye, kunye nendlela yokusebenzisa igrama ngokuchanekileyo, isipelingi kunye neziphumlisi kuzo zonke iintlobo zokubhala.
Ngebanga le-12, abafundi abaninzi baye bagqiba iAlgebra I, i-Algebra II kunye neJometri. Ukuba azinjalo, kufuneka basebenzise unyaka wabo ophezulu ukwenza njalo.
Inkqubo yokufunda yezibalo ze-12-bakala ibandakanya ukuqonda okunzulu kwe-algebra, i-calculus, kunye neenombolo zamanani. Abafundi banokuthatha iiklasi ezinjenge-pre-calculus, i-calculus, i-trigonometry, i-statistics, i-accounting, i-math, okanye i-math.
Iikholeji ezininzi zikulindeleke ukuba zibonele iminyaka engama-3 kuphela yesayensi yekhredithi, ngoko ke unyaka wesine wezesayensi awufunwa ukuba uphumelele kwiimeko ezininzi, kwaye akukho ndlela yokufunda yesifundo.
Abafundi abangazange bagqiba iminyaka engama-3 yesayensi bafanele basebenze ekugqityiweyo kunyaka wabo ophezulu. Abafundi abaya kwintsimi enxulumene nesayensi banqwenela ukuthatha izifundo ezongezelelweyo zesayensi.
Izinketho zesayensi ye-12-bakala ziquka i-physics, i-anatomy, i-physiology, iikhosi eziphambili (i-biology, i-chemistry, i-physics), i-zoology, i-botany, i-geology, okanye nayiphina ikhosi ye-college ye-college.
Abafundi banqwenela ukulandela iikhosi ezikhokelayo ezichaphazelekayo kwintsimi yesayensi, ezifana nezifundo ze-equine, ukutya okunomsoco, i- forensics , okanye i-horticulture.
Njengoko inzululwazi, ezininzi iikholeji zikulindele ukubona kuphela iminyaka emithathu yeengxowa-mali zentlalo, ngoko ke akukho mfundo ephantsi yokufunda kwizifundo zentlalo yeshumi-12.
Abafundi banomdla kwiikhosi ezikhethiweyo eziwela phantsi kwinqanaba leengxowa-zentlalo ezifana neengqondo, i-sociology, i-anthropology, i-geography, iinkolo zehlabathi , okanye i-theology.
Ukuba abazange bafunde ngaphambili, ezi zihloko zilandelayo zikhetho ezifanelekileyo kwi-bakala le-12: imigaqo kaRhulumente wase-US ; amaxwebhu aphambili ase-US; Zolimo; zokuhlala; ulondolozo; ishishini kunye neshishini e-US; i propaganda kunye noluntu; rhu lumente; inkqubo zo qoqosho; imfundo yabathengi; qoqosho; kunye nerhafu kunye nemali.
Abafundi banqwenela ukufundisisa izihloko ezifana nobudlelwane bamazwe ngamazwe kunye nomgaqo-nkqubo waseMelika wangaphandle okanye uthatha iikholeji yokubhalisa kabini.
Iikholeji ezininzi zikulindele ukuba zibone ubuncinane ubuncwane bama-6. Abafundi abathweswe iKholeji kufuneka baqwalasele izifundo ezifana nolwimi lwangaphandle (ubuncinane ubuncinane kwiminyaka emibini yeelwimi ezifanayo) kunye nobugcisa obubonwayo kunye nobuchule (ubuncinane bonyaka wesikweletu).
Abafundi abangabikho kwiikholeji kufuneka bakhuthazwe ukuba bafumane iitaliti ezikhethiweyo kwiindawo ezinokubaluleka komsebenzi. Abafundi banokufundisisa phantse nayiphi na isihloko ngesikolo esikhethiweyo.
Ezinye iinketho ziquka ukuyila imifanekiso, inkqubo yekhompyutheni, imidiya yedijithali , ukuthayipha, ukuthetha koluntu, ingxoxo, ukonga kwekhaya, ukucwangcisa uvavanyo, okanye ukuyila. Kwiimeko ezininzi, abafundi bangakwazi ukubala amava emisebenzi okwekhredithi ekhethiweyo.
Iikholeji ezininzi zikulindele ukuba zibone ubuncinane bonyaka owodwa wemali yesikweletu sempilo kunye nesinye semester yempilo okanye uncedo lokuqala.
Indlela yokufumana iindawo zokuFunda ezikolweni
Iinqununu zeMpawu zeMpawu
10 Iimpawu zeMathematika eziza kuphazamisa ingqondo yakho
I-Argumentum ad Populum (Isibheno kwiNumeri)
Ubulili, ubulili, kunye nobulili kuchazwe
Indlela yokwenza i-Acid Sulfuric ekhaya
Iprofayili yeNgqungquthela yamaKhosi eMzantsi yamaKhosi (SCLC)
Imbali emfutshane yeMfazwe kwiDrugs
4 Inkcazo yeeNkcazo zeeNkcazo eziLungileyo
IiKholeji eziphezulu zamaKatolika kunye neeYunivesithi
UJohn McPhee: Ubomi bakhe kunye noMsebenzi
Inxaxheba yeKomidi yoLungelelaniso lwabaFundi beNkcubeko kumaLungelo oLuntu
AmaGlue Clusters: Abamelwane abanobuGcisa kwiNdalo
I-Admission University yaseNorth West
Yintoni Ongayenza NgesiGanga seKhemistry?
IYunivesithi eBuffalo GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Iprofayili kaSusan Rice - I-Biography kaSusan Rice
Indlela yokwenza iLava eLova elikhuselekileyo
Indlela Yokuqala Ipeyinti Yomfanekiso
Konke 'ngeAven,' iFrench Super Verb
Kutheni iAry Ice Dangerous?
Amanqaku aphezulu kunye aphantsi neeBronze Age Age
Ubomi Obunenjongo Okufundwayo kwiSifundo esikolweni
Isifundo seMatarin Daily: "Musa ukuba" ngesiTshayina
Isizukulwana esilahlekileyo kunye nabalobi abachaze ihlabathi labo
I-Fordham University Admissions
Indlela yokwenza i-Floam
Indlela Ukusebenza Ngaphandle Kwama-Flippers Unokukunceda Ukubhukuda Kwakho
Ukutya kwesiShayina isigama
Amandla enjongo ekuzalisekeni kweeNdondo zakho
I-East Central University Admissions
I-Hitchcock Laading Ladies